🥇 ▷ Tiknolojiyadda ka hortagga rabshadaha galmo iyo & # 039; anti-gaangiska & # 039; ✅
Tiknolojiyadda ka hortagga rabshadaha galmo iyo & # 039; anti-gaangiska & # 039;
Magacaygu marka hore Laura Luelmo. Waxaan jiray 26 sano maalintii aan go’aansaday inaan ordo; Way i kufsadeen oo i dileen. Sheekada ayaan kuu sheegayaa maxaa yeelay ma sii socon karo. Magacaygu Diana Quer. Waxaan jiraa 18 sano markii la i dilay. Nin baa i soo raacay, kufsaday oo i dhaawacay, ka dibna jidhkayga ku tuuray ceelka. Waxaan u sheegnaa sheekadiisa maxaa yeelay isagu ma awoodo. Cilmiga codka ayaa dhigaya mid shan arday oo ka socda Madrid oo soo saaray ‘Goorma iyo Halkee’, codsiyada leh ujeeddo cad, bixi amniga haweenka. Isticmaalkeeda ayaa loogu talagalay in lagu ururiyo dhammaan jidadka caadiga ah ee Isticmaalayaasha markay guriga ku noqdaan, ordi doono ama shaqeyn doono. Nidaam lagu mideeyo kuwa jira si loola dagaallamo karbaashka rabshadaha jinsiga.
Howlgalkan waa mid fudud. «Marka hore, waxaad gelaysaa halkaad u socoto iyo meeshaad joogto. Madalkeenna ogaado anomal markaad soconeyso ama ordo oo aad hesho meeshaada waqtiga dhabta ah. Haddii aad joojiso ama aad ka dhumiso halkaad u socotid, way kuu digeysaa. Haddii aad sheegato inaad kujirto khatar, ogeysii 112 adeegyada gurmadka deg-degga ah ama xiriiryada aad taleefanka ku sameysay, ”ayay masuuliyiintu sheegeen.
Paula Fernandez, Lucia Adrian, Nuria Velloria, Lucia Fernandez Y Sandra Caamano jira inta u dhaxaysa 15 iyo 16 sano, waa naqshadeeye arjigaan oo u keenay finalka weyn ‘Feejignaanta Teknolojiyada’, waa dhacdo dhiirrigelisa kaqeybgalka haweenka inta u dhexeysa 10 iyo 18 sano jirka adduunka ee teknolojiyadda. Ujeeddada barnaamijkan ganacsi abuurka waa in la abuuro dalabyo diirada saaraya xalinta dhibaatooyinka bulshada, iyo sidoo kale qorshayaasha ganacsiga.
Haddii ay ku dhacayaan bartamaha bisha Agoosto munaasabad ka dhaceysa Silicon Valley (Mareykanka), waxay heli doonaan $ 15,000 tababbarkooda, in kasta oo ay guuleysteen, codsi la soo saaray hadda waxaa lagala soo bixi karaa telefoonnada casriga ah ee Android, si ay awood ugu helaan caawin haween badan. Haweenka da’da yar, ee dhammaystiray ESO-4 IES Velázquez de Móstoles, oo ku yaal magaalada Madrid, waxay horumarisay mashruucan iyada oo gacan laga helayo laba aqoonyahanno iyo laba iskaashi oo ka socda Jaamacadda Carlos III.
“Waxaannu haysannaa kiis dhowaan oo haween ah oo dareemaya cabsi markii ay keligood waddada ku jiraan waxaanan go’aansannay inaan ka fulinno mashruuc ku saabsan wax amni innaga siin doona,” ayay sharraxeen.
Sida madal caan ah ‘Wadajir’, oo ku saleysan fikradda ah la xiriirka haweenka ka baxay habeenkii si aysan ugu noqonin kaligood guriga oo ay sidaas ku sameyn karaan kooxo. Codsigan, oo ay sameeyeen Pilar García iyo Luis Yupanqui, ayaa dhawaan helay abaalmarinta ‘EMrenbit Tech Camp 2019’.
Codsigan, oo ay fulinayaan Pilar García iyo Luis Yupanqui, waxay heleen abaalmarinta ‘EMrenbit Tech Camp 2019’ Jimcaha. Gudaha Spain waxay leeyihiin ugu yaraan 37 kufsi kooxeed Illaa iyo sanadkaan, kii ugu dambeeyay wuxuu soo sheegay dhowr kufsi usbuucii hore lix nin oo dhalinyaro ah ilaa gabar weyn. 18 sano Bilbao.
Barnaamijyo gaar ah oo haweenka lagu caawiyo ayaa ka mid ah Qof walba wada, oo bixiya adeegyo kala duwan, sida helitaan dhakhso leh taleefanka 016, ee ka hor imanaya xadgudubka lamaanaha, macluumaad ku saabsan waxa la sameeyo haddii aad la kulanto noocan ah rabshadaha noocan ah iyo shaqada cambaareynta astaanta dalabka si uusan qofna u ogaanin in lagu rakibay a telefoonka gacanta, iyo kuwo kale. Iyadoo shaqada ugu weyn ee ogeysiinta 016, La Adeegsiga xadgudubka jinsiga., waxay siisaa dadka isticmaala inay si toos ah uhelaan kaalmada taleefanka ee muhiimka ah: booliska, xaaladaha degdega ah ee caafimaadka, iwm.
Codsi kale oo aad u adeegsan karto inaad ku soo sheegto kiisaska xadgudubka jinsiga, ama mid ka dhan ah dadkaaga ama kuwa kale. Nerd, oo bixiya toos u helitaan 016 iyo 112.